Asomafo Nnwuma 15 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Asomafo Nnwuma 15:1-41
Wogyee twetiatwa ho akyinnye wɔ Antiokia (1, 2)
Wɔde asɛm no kɔɔ Yerusalem (3-5)
Mpanyimfo no ne asomafo no hyiaam (6-21)
Krataa a efi akwankyerɛ kuw no hɔ (22-29)
Montwe mo ho mfi mogya ho (28, 29)
Krataa no hyɛɛ asafo ahorow no nkuran (30-35)
Paul ne Barnaba; obiara faa ne kwan (36-41)
15 Na nnipa bi fi Yudea sian bae, na wofii ase kyerɛkyerɛɛ anuanom no sɛ: “Sɛ moantwa twetia* sɛnea Mose amanne no te a,+ morentumi nnya nkwa.” 2 Na akasakasa ne akyinnyegye a emu yɛ den kɔɔ so wɔ wɔne Paul ne Barnaba ntam. Enti wɔyɛɛ nhyehyɛe sɛ Paul ne Barnaba ne wɔn mu binom nkɔ* asomafo no ne mpanyimfo a wɔwɔ Yerusalem no nkyɛn,+ na wɔmfa asɛm* no nkɔto wɔn anim. 3 Na asafo no gyaa wɔn kwan kakra. Na mmarima no kɔfaa Foinike ne Samaria, na wɔkaa sɛnea amanaman mufo no asakra wɔn adwene no ho asɛm pii kyerɛɛ anuanom no, na ɛmaa anuanom no nyinaa ani gyei paa. 4 Bere a woduu Yerusalem no, asafo no ne asomafo no ne mpanyimfo no gyee wɔn kama, na wɔkaa nneɛma bebree a Onyankopɔn nam wɔn so ayɛ no kyerɛɛ wɔn. 5 Nanso, ebinom a na wɔka Farisifo fekuw no ho a na wɔabɛyɛ gyidifo no sɔre fii wɔn nkongua so, na wɔkae sɛ: “Ehia sɛ wotwa wɔn twetia, na wɔhyɛ wɔn sɛ wonni Mose Mmara no so.”+ 6 Ɛno nti, asomafo no ne mpanyimfo no hyiae sɛ wɔrebɛhwɛ aka asɛm no. 7 Na wosusuw asɛm no ho kɔɔ akyiri.* Ɛnna Petro sɔree, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mmarima, anuanom, mo ara munim sɛ, mfiase pɛɛ na Onyankopɔn hwɛɛ mo mu yii me sɛ amanaman mufo mfa m’anom asɛm so nte asɛmpa no na wonnye nni.+ 8 Na Onyankopɔn a onim nea ɛwɔ komam+ no maa wɔn honhom kronkron+ de dii adanse, sɛnea ɔyɛ maa yɛn no. 9 Na wamma nsonsonoe biara amma yɛne wɔn ntam,+ na mmom ɔnam gyidi so dwiraa wɔn koma ho.+ 10 Ɛnde, adɛn nti na moresɔ Onyankopɔn ahwɛ, na mode kɔndua+ a yɛne yɛn agyanom antumi ansoa reto asuafo no kɔn ho?+ 11 Mmom yegye di sɛ, sɛnea wɔnam Awurade Yesu adom so agye yɛn no,+ saa ara na wɔagye wɔn nso.”+ 12 Bere a ɔkaa saa no, nnipadɔm no nyinaa yɛɛ komm. Ɛnna Barnaba ne Paul kaa nsɛnkyerɛnne ne anwonwade bebree a Onyankopɔn nam wɔn so yɛe wɔ amanaman mu no kyerɛɛ wɔn, na nnipadɔm no tiee wɔn. 13 Bere a wɔkasa wiei no, Yakobo kae sɛ: “Mmarima, anuanom, muntie me. 14 Simeon+ aka no pefee ama yɛahu sɛnea Onyankopɔn dan n’ani kɔɔ amanaman no so bere a edi kan na oyii nnipa bi fii wɔn mu de ne din too wɔn so no.+ 15 Eyi ne nsɛm a Adiyifo no akyerɛw no hyia. Wɔakyerɛw sɛ: 16 ‘Eyinom akyi no, mɛsan aba, na mɛma Dawid ntamadan* a ahwe ase no so asi hɔ bio; mɛsan asi nea adwiriw agu no, na mama asi ne dedaw mu bio, 17 sɛnea ɛbɛyɛ a nnipa a aka no ne amanaman mufo nyinaa, nnipa a me din da wɔn so no, bɛhwehwɛ Yehowa* denneennen, Yehowa* a ɔreyɛ nneɛma yi asɛm ni,+ 18 nneɛma a wonim fi tete no.’+ 19 Enti me de, m’adwene ne sɛ, ɛnsɛ sɛ yɛhaw wɔn a wofi amanaman mu reba Onyankopɔn nkyɛn no,+ 20 na mmom yɛnkyerɛw nkɔma wɔn sɛ, wɔntwe wɔn ho mfi nneɛma a abosom agu ho fĩ+ ne aguamammɔ*+ ne mmoa a wɔakum wɔn a wɔanhwie wɔn mogya angu ne mogya ho.+ 21 Na efi tete mmere mu no, Mose wɔ wɔn a wɔka ne ho asɛm wɔ nkurow nkurow so, efisɛ homeda biara wɔkenkan ne nsɛm den wɔ hyia adan mu.”+ 22 Afei asomafo no ne mpanyimfo no ne asafo no nyinaa sii gyinae sɛ, wobeyi mmarima bi afi wɔn mu aka Paul ne Barnaba ho akɔ Antiokia. Enti wɔsomaa Yuda a wɔfrɛ no Barsaba ne Silas.+ Ná wɔyɛ mmarima a wodi anuanom anim. 23 Wɔkyerɛw nsɛm yi, na wɔde somaa wɔn: “Mo nuanom asomafo ne mpanyimfo na ɛrekyerɛw mo yi. Yɛde rebrɛ anuanom a wofi amanaman mu a wɔwɔ Antiokia+ ne Siria ne Kilikia: Asomdwoe nka mo! 24 Yɛate sɛ yɛn mu bi aba mo nkyɛn, na wɔrekeka nsɛm bi de rehaw mo,+ na wɔpɛ sɛ wɔsɛe mo adwene. Nanso yɛmmaa wɔn akwankyerɛ biara. Ɛno nti, 25 yɛayɛ adwenkoro sɛ yebeyi mmarima bi aka yɛn adɔfo Barnaba ne Paul ho, na yɛasoma wɔn aba mo nkyɛn. 26 Saa mmarima yi na yɛn Awurade Yesu Kristo din nti, wɔde wɔn ho* abɔ afɔre.+ 27 Enti yɛresoma Yuda ne Silas, sɛ wɔn nso mfa wɔn ano mmɛka asɛm koro no ara nkyerɛ mo.+ 28 Na honhom kronkron+ no ne yɛn ara nso mpɛ sɛ yɛde adesoa foforo biara to mo so, gye eyinom a ehia yi. Ɛne sɛ: 29 Montwe mo ho mfi nneɛma a wɔde abɔ afɔre ama abosom+ ne mogya+ ne mmoa a wɔakum wɔn a wɔanhwie wɔn mogya angu+ ne aguamammɔ*+ ho. Sɛ motwe mo ho koraa fi eyinom ho a, ebewie mo yiye. Ensi mo yiye!”* 30 Bere a wogyaa mmarima yi kwan no, mmarima no kɔɔ Antiokia, na wɔfrɛɛ nnipa no boaa ano, na wɔde krataa no maa wɔn. 31 Bere a wɔkenkan wiei no, asɛm no hyɛɛ wɔn nkuran, na wodii ahurusi. 32 Na esiane sɛ Yuda ne Silas nso yɛ adiyifo nti, wɔkaa nsɛm pii de hyɛɛ anuanom no nkuran, na wɔhyɛɛ wɔn den.+ 33 Wodii bere kakra wɔ hɔ, na ɛno akyi no, anuanom no gyaa wɔn kwan asomdwoe mu kɔɔ wɔn a wɔsomaa wɔn no nkyɛn. 34 *—— 35 Nanso Paul ne Barnaba de, wɔkɔɔ so tenaa Antiokia, na wɔne afoforo pii kyerɛkyerɛe, na wɔkaa asɛmpa no, kyerɛ sɛ, Yehowa* asɛm. 36 Na nna bi akyi no, Paul ka kyerɛɛ Barnaba sɛ: “Ma yɛnsan nkɔ* anuanom nkyɛn wɔ kurow biara a yɛkaa Yehowa* asɛm wom no mu, na yɛnkɔhwɛ sɛnea wɔn ho te.”+ 37 Ná Barnaba abɔ ne tirim sɛ ɔde Yohane a wɔfrɛ no Marko no bɛka wɔn ho akɔ.+ 38 Nanso na Paul ne no nyɛ adwene sɛ wɔde Marko bɛka wɔn ho akɔ, efisɛ ogyaw wɔn hɔ wɔ Pamfilia, na ɔne wɔn ankɔyɛ adwuma no.+ 39 Eyi de akasakasa a emu yɛ den bae, na obiara faa ne kwan. Na Barnaba+ faa Marko kaa ne ho, na wɔfaa po so hyɛn kɔɔ Kipro. 40 Ɛnna Paul faa Silas, na anuanom de Paul hyɛɛ Yehowa* nsa sɛ ɔmfa n’adom mmoa no.+ Afei ofii hɔ kɔe. 41 Na ɔkɔfaa Siria ne Kilikia, na ɔhyɛɛ asafo ahorow no den.
^ Anaa “mforo nkɔ.”
^ Anaa “asɛm a wɔregye ho akyinnye.”
^ Anaa “wogyee asɛm no ho akyinnye pii.”
^ Anaa “sese; apata; fi.”
^ Anaa “Yekyia mo!”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Sɛnea ɛte biara, ma yɛnsan nkɔ.”
Asomafo Nnwuma 15